Nhau - Isu tinofara kupiwa mvumo yekuisa (kugadzirisa, kuyedza) nzvimbo dzemagetsi
Isu tinofara kupiwa mvumo yekuisa (kugadzirisa, kuyedza) nzvimbo dzemagetsi
14 Kubvumbi 2020, Pachishandiswa magwaro akaburitswa pawebhusaiti yepamutemo yeShandong Supervision Bureau ye State Energy Administration - sarudzo ye Shandong Supervision Bureau ye State Energy Administration kupa rezinesi rekutungamira (Shandong Supervision qualification [2020 ] Kwete .120), Kambani yedu yakapasa bvunzo yakasimba yeShandong Supervision Bureau uye yakawana marezinesi ezvivakwa zvemagetsi kurodha (kugadzirisa, kuyedza) (rezinesi Nha.: 6-1-00030-2020), Iwo marezinesi mapoka ari "Ina-kirasi, ina-kirasi, ina-kirasi", Iyo nguva yechokwadi ndeye makore matanhatu.
Iyo License Yekuisa (Kugadzirisa uye Kuyedza) yeMagetsi Zvivakwa ndiyo inodiwa inodiwa nemabhizinesi ari kuita kuiswa uye kuvaka, kugadzirisa projekiti uye kuyedza kwesimba remagetsi, kufambisa uye kugovera, photovoltaic simba rekugadzira uye nyowani yekugadzira magetsi. Mumakore achangopfuura, huwandu hwesimba remagetsi enjiniya bhizinesi rakazivikanwa uye kufarirwa nevatengi uye vazhinji vatengi, "turnkey chirongwa" chichava chiitiko chemberi chekusimudzira, kurodha (kugadzirisa, kuyedza) magetsi zvivakwa zvitupa kutora, kuratidza kuti kambani yedu ine yekutanga simba yekuita yakasanganiswa yemagetsi edzimba inosanganisa inotsigira chirongwa, inogona kuve iri kuita magetsi zvivakwa kumisikidza, kugadzirisa, kuyedza bhizinesi; Kubatsira iyo kambani kubva kune imwechete chigadzirwa yekutengesa modhi kune yakazara seti yevhisi system, kugadzira "yakawanda-chigadzirwa + injinjini yekuisa inotsigira + kushanda uye kugadzirisa masevhisi" yakazara seti yemhinduro yakazara chikuva; Batsira kunatsiridza kukwikwidza kwedu uye mhando yechiratidzo mumusika, kuwedzera kuvimba kwevatengi mukambani medu.
Mune ino nguva yekuenderera kwakakamurwa kwemusika wakanangwa, mabhizinesi anofanirwa kunzwisisa zvinodiwa nevatengi uye kuchera zvakadzika kudiwa, uye vozosangana nezvinodiwa kuitira kusimudzira kusimudzira. Pese apa, kambani yedu inonamatira kune yakakosha tsika ye "mutengi mumoyo mangu, hunhu mumaoko angu, mushandirapamwe wakavakirwa mukuhwina-kuhwina", kugadzirisa maratidziro ekurwadziwa kwevatengi, kupfuura zvinodiwa nevatengi sebasa ravo vega, kushingairira kutsvaga mhando itsva uye nyowani mhinduro dzekushandira vatengi, kuitira kuti uwane kukosha kwekusika, kuhwina-kuhwina kubatana. Nekuda kweizvozvo, isu tichakwanisa kuita zvekumisikidza, kugadzirisa uye kuyedza zviitiko mu35 kV uye pazasi pemagetsi emagetsi uye makamuri ekuparadzira. Isu isu tine huwandu hwepakeji pasuru, yekugadzirisa uye kuyedza kugona kwemidziyo, iyo ichawedzerawo bhizinesi redu uye nekupa hunyanzvi, hwakazara uye hune hanya nebasa kune vatengi vedu. Panguva imwecheteyo, kuongororwa kwehunyanzvi, kune rumwe rutivi, kunoratidzira kwedu kuramba tichitsvaga kwekuvandudza masevhisi emagetsi, kune rimwe divi, zvakare inoratidza simba rakazara rekuenderera kwedu kwesainzi uye tekinoroji kusimudzira uye hunyanzvi.
Iyo kambani yakanyatsobatanidza zvemukati zvemhando yepamusoro zviwanikwa uye yakagadzira pfungwa nyowani nemitemo yekusimudzira kuvandudza kwebhizinesi. Isu tinotenda kuti kukwidziridzwa kwebhizinesi rino kunobatsira kambani kuwana budiriro huru mune ramangwana. Tichaomerera kuchinangwa che "kupa mhando yepamusoro, yakachengeteka uye yakavimbika yekuendesa uye kuendesa zvigadzirwa nemasevhisi, zvichitungamira indasitiri uye kubatsira nzanga", kugara uchivhura nekuvandudza, nekugadzira kukosha kwakanyanya uye kubatsirwa kwenzanga iri munzira yekufambisa simba, kugovera uye sevhisi!